तपाईंको हेटर्स अ H्गालो? हुनसक्छ यो तपाइँका प्रेमीहरूलाई माया गर्दछ! | Martech Zone
बुधबार, अप्रिल 15, 2015 सोमबार, अप्रिल 20, 2015 Douglas Karr
जे बेयरको समापन मूल मुख्य हो मैले सोशल मिडिया मार्केटि World संसारमा देखेको एक उत्तम हो। जेले आफ्नो आगामी पुस्तक छलफल गरे, तपाईंको हेटर्स अ H्कमाल गर्नुहोस्। उनको प्रस्तुतीकरण एकदमै राम्रो थियो र यसबाट केहि आश्चर्यजनक अनुसन्धानलाई छेड्न गयो टम वेबस्टर र उनको टोली कसरी गुनासोहरू छिटो र रणनीतिक रूपमा समाधान गर्न लगानी तपाईंको व्यवसाय बढाउन मा।
प्रस्तुतिले कम्पनीहरूको उजुरीमा प्रतिक्रिया गर्ने र यो कसरी व्यवसायको लागि राम्रो छ भन्नेहरूको केही शानदार उदाहरणहरू बोल्दछ।
म एक स्केप्टिक हुँ वास्तवमा, एक बर्ष अघि सोशल मिडिया मार्केटि World वर्ल्डमा मैले एउटा प्रस्तुति गर्‍यो जहाँ मैले सामाजिक मिडियामा कम्पनीहरूको शीर्ष गलत कामहरू गरें र प्रमाणित गरे कि कुनै पनि गल्तीले उनीहरूलाई बनाउने कम्पनीहरूमा दीर्घकालीन, नकारात्मक प्रभाव पार्न सकेन।
हालसालै फेसबुकमा, जयले एयरलाइन्स सेवाको केहि व्यक्तिगत अवलोकनहरू साझा गरे र मलाई तत्काल हास्य कलाकार बीचको यो आश्चर्यजनक छलफलको सम्झना गराइयो लुईस सीके र कानन ओ ब्रायन.
आजकाल उपभोक्ताको औंलाको टुप्पोमा उपलब्ध अतुलनीय टेक्नोलोजी देखेर म छक्क परेको छु, तर म अनलाईन हेर्ने कम्पनीको लगातार ड्रमबिटमा पनि निराश छु।
के एप्पलले यसको हेटर्स आलिंगन गर्नुपर्छ?
म पहिलो हातले कुरा गर्न सक्ने एक राम्रो उदाहरण एप्पल हो। म एप्पलको ठूलो प्रशंसक हुँ। म नट-केसमध्ये एक हुँ जसले3एएम ईएसटीको लागि उसको अलार्म सेट गर्यो र एप्पल वाचसको पहिलो ब्याच खरीद गरें। म यो मेरो हातमा लिन पर्ख्न सक्दिन।
अनलाइन पढ्नुहोस् र टेकीहरू, ब्ल्गरहरू, र एप्पल-हेटरहरू घडीमा घृणा गर्ने प्रतिध्वनि इको छ। तिनीहरू जताततै छन् ... र तिनीहरूको कुनै पनि विचारले मलाई मतलब गर्दैन। र मलाई लाग्दैन कि उनीहरूको कुनै पनि राय एप्पलको लागि फरक पर्दछ। ज्यादै महँगो, नवीनताको कमी, गुण र गतिको मुद्दाहरू ... घृणा गर्नेहरूबाट सबै गुनासोहरू। हे घृणा गर्नेहरू ... एक लाखमा एक दिनमा बेचियो र अब पछाडि अर्डर जुन पछाडि। हेटर्स जे भए पनि एप्पल वाच द्वारा गएका थिएनन्, किन तपाईं तिनीहरूलाई अंगालो गर्नुहुन्छ?
DK New Media फायर हेटर्स र प्रेमीहरूलाई माया गर्दछ
पछिल्लो वर्ष, एक गडबड वर्ष पहिले ठीक पछि, हामीले हाम्रो रिकभरी शुरू गर्यौं। हाम्रा धेरै मुद्दाहरू मेरो गल्ती थिए। हामीले आवश्यक संसाधनहरू बिना विस्तार गर्‍यौं र त्यसपछि खाली ठाउँ भर्नको लागि Scrambled। सहि ग्राहकहरूको पहिचान गर्न कडा मेहनत गर्नुको सट्टा हामीले हाम्रो सहयोगको लागि सोध्ने सबैजनालाई समात्यौं ... र यो एक दुःस्वप्न थियो। हामी को बारे मा एक इन्फोग्राफिक डिजाइन पनि घायल ग्राहकहरु को प्रकारहरु हामी मार्दै थियौं.
हामीले धेरै ग्राहकहरूसँग काम स्वीकार्यौं जुन अपमानजनक र सस्तो थियो। उनीहरूले हामीलाई साझेदारको रूपमा हेरेनन, उनीहरूले हामीलाई हेरिरहेका हरेक अन्तिम पैसालाई निस्किने चुनौतीको रूपमा हेरे। मैले हाम्रा शत्रुलाई अug्गालो हालेको छैन, हामी उनीहरूलाई हटायौं।
हामीले अब हाम्रा ग्राहकहरुलाई पूर्वकालीकरण गर्न र हामी एक अर्काको साथ सांस्कृतिक रुपमा उत्कृष्ट फिट छौं र हामी उनीहरुसंग काम गर्न सफल हुन सक्छौं भन्ने विश्वास गर्न असाधारण प्रयास गर्छौं। रात र दिनको फरक छ। हामी हाम्रो सर्वश्रेष्ठ वर्ष बित्दैछौं, हामी हाम्रो पदचिन्ह विस्तार गर्दैछौं, हामी खुसी छौं, र हामीले गरिरहेको काम हामी पहिले भन्दा धेरै राम्रो छ।
हाम्रा घृणा गर्नेहरूलाई खुशी पार्ने प्रयास थकाइलाग्दो थियो। र हामी अब प्रयास गर्दैनौं। यदि कसैले हामीलाई नराम्रो व्यवहार गर्छ भने, हामी तिनीहरूलाई इमानदारीसाथ जवाफ दिनेछौं - यो सार्वजनिक हो वा निजी। कहिलेकाँही हामी सिsहरू ताल्चा लगाउँछौं, तर प्राय: मात्र हामी हिँड्न थाल्दछौं। हामीले हाम्रो ध्यान ग्राहकहरुमा केन्द्रित गर्नु पर्दछ जसले हामीलाई कदर गर्दछ, होइन कि हामीलाई भाँडामा लिन्छ, हामीलाई सिफारिस गर्छ, र त्यो बस्छ हामीमा भाँडोको शटहरू लिएर।
आफ्नो दुश्मनलाई अug्गालो? धेरै धेरै प्रयास। बरु मेरा प्रेमीहरूलाई माया गर्छु। तिनीहरू ती हुन् जसले वचन फैलाउँदछन्, हामीसँग उनीहरूको स .्गत बढाउँछन्, हामीलाई बढी ग्राहकहरू फेला पार्दछन्, र हामी उनीहरूको लागि के गर्छौं भनेर बुझ्दछौं।
के विजेताहरू हेटर्सलाई सताउँछन्?
जब म व्यापार, खेल, राजनीति, वा कुनै अन्य सफल नेतालाई हेर्छु - म प्राय जसो मानिसहरूलाई घृणा गर्दछु जसले उनीहरूलाई घृणा गर्छन् र आफ्नै सफलता बनाउँदछन्। असफलताहरू मैले देखेका छन् कि सबैले सुनेका थिए, सबैलाई खुशी पार्न खोजेका थिए, र बजारले तोकेको असम्भव अपेक्षाहरू कहिल्यै पूरा गर्न सक्दैनन्।
जब म मोबाईल, केबल, उपयोगिताहरू, एयरलाइन्स र अन्य जस्ता उद्योगहरू हेर्छु ... म उपभोक्ताहरू उत्पादन वा सेवाको मूल्य भन्दा बाहिर मागहरू गरेको देख्छु जुन उनीहरू तिर्न तयार छन्। र यदि उनीहरूले के पाउँदैछन् भन्ने कुरा प्राप्त गर्दैनन् भने उनीहरू सार्वजनिक रूपमा हेर्न अनलाइन हिसाबमा फ्याँकिन्छन्। र यदि कम्पनीले उनीहरूलाई अझ राम्रो सेवा प्रदान गर्ने प्रयास गर्दछ र उनीहरूको बिलमा केही थप पैसा थप्यो भने उपभोक्ताहरू अर्को कम लागत समाधानको लागि जमानत गर्दछन्।
मेरो अनुमान यो छ कि यदि ______ एयरलाइन्सले उनीहरूको ग्राहकहरुलाई अझ नराम्रो व्यवहार गर्‍यो भने, उनीहरु अझै पनी आफ्नो अर्को गन्तव्यमा पुग्ने हवाईजहाज प्याक गरीरहेका छन जसले कम अनलाईन खोज्नका लागि अनलाइन खोज प्रयोग गर्थे। मलाई लाग्दैन कि अधिकांश घृणा गर्नेहरूले पनि एयरलाइन कम्पनीको बारेमा ख्याल राख्छन्, उनीहरू जेसुकै गुनासो गर्ने छन्। र धेरै जसो एयरलाइन्सको हबहरू राखिएको छ जहाँ तिनीहरूको ब्राण्डबाट टाढा जानको लागि लगभग असम्भव छ यदि तपाईंले ख्याल गर्नुभयो भने पनि।
माया चाहनुहुन्छ? यसको लागि तिर्नुहोस्!
अर्कोतर्फ, यदि मैले व्यवसायिक वर्गको लागि भुक्तान गर्छु, लक्जरी सवारीहरू किन्नुहोस्, विस्तारित वारेन्टी वा बीमामा पैसा खर्च गर्‍यो, वा बढी महँगो ल्यापटपको लागि वसन्त, मलाई अरूले चलेको समस्याहरू कहिल्यै देखा पर्दैन। डेल्टाको यात्री लाउन्ज - उदाहरणका लागि - अमेजिंग हो र तपाईं अधिक यात्राको लागि थोरै थपको लागि पहुँच खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। सबैजना टिकट एजेन्टमा पर्खँदै गर्दा, मैले एक पेय समातें र डेल्टा प्रतिनिधिले मेरो नाम लिए र मेरो बाटोमा आइरहेको कार्यमा झुण्डियो। कुनै गडबड छैन, कुनै गडबडी छैन ... मैले दुबै यसको कदर गरे र मैले यसको लागि भुक्तान गरें।
अतिरिक्त भुक्तान गर्दा, म उत्कृष्ट सेवा पाउँछु, लगभग कुनै कुर्ने समय, र तात्कालिक प्रतिक्रियाहरू। यदि म उत्तम माग गर्दैछु भने, म यसको लागि भुक्तान गर्न इच्छुक हुनुपर्दछ। यदि म उत्तम गर्न सक्दिन भने, म केमा बाँकी रहेको छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनुपर्दछ।
मलाई गलत नबनाऊ। म दुखी ग्राहक फ्लिप गर्न को लागी एक निष्कपट प्रयास अगाडि बढाउनेछु। म कम्तिमा owणी छु किनकि तिनीहरूले हामीसँग लगानी गरेका थिए। तर यदि तिनीहरू केवल दयनीय छन् वा मलाई वा हाम्रो स्टाफलाई दुर्व्यवहार गर्छन्, कसैलाई डाटाको लागी समय छैन! मलाई लाग्छ कि त्यहाँ अनलाइन घृणा गर्नेहरूको एक महत्त्वपूर्ण प्रतिशत छ जुन कम्पनीहरूले बग गर्न बन्द गर्नुपर्दछ।
जे ... तपाईंले आफ्नो काम काट्नु भयो।
टैग: एडिसन अनुसन्धानतपाईका शत्रुहरुलाई घृणा गर्नुहोस्जय बेयरआफ्ना प्रेमीहरूलाई माया गर्नुहोस्अनलाइन गुनासोहरूअनलाइन समीक्षाभावनाटम वेबस्टर
अप्रिल 15, 2015 मा 10: 23 PM
महान पोस्ट डग, धन्यबाद।
केही चीज। म ठूला गल्तीहरू र सामाजिक मिडिया ईन्धन सes्कटहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको छैन। मुख्य वाक्यमा कुनै पनि उदाहरण त्यस्ता थिएनन्, र पुस्तकमा कुनै पनि उदाहरण त्यो होईन, कि त। के म कुरा गर्दैछु दिनहुँ दिन नकारात्मक टिप्पणीहरू, गुनासोहरू, १ र २-स्टार समीक्षा जुन लगभग सबै आकार र प्रकारका कम्पनीहरूले असंगत प्रतिक्रिया दिन्छन्, यदि वास्तवमा।
के यसले प्रत्येक गुनासोलाई जवाफ दिन धेरै काम गर्दछ, हरेक पटक, हरेक च्यानलमा? अवश्य। तर हामीले गरेको अनुसन्धानले देखाउँदछ कि ग्राहकको वकालतमा वृद्धि जब तपाईं उजूरीलाई जवाफ दिनुहुन्छ पर्याप्त छ, र जब तपाईं नकारात्मकता बेवास्ता गर्नुहुन्छ ग्राहक वकालत कम।
केहि कम्पनीहरूले नकारात्मक टिप्पणी र उजूरी बेवास्ता गर्न सक्छन्? हो। तर ती कम्पनीहरू साधारण छैनन्।
र मँ यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि हग तपाईको हेटर्स प्रिस्क्रिप्शन यो छैन कि ग्राहक सधैं सही हुन्छ। यो सत्य होईन, र यो तपाईंको व्यापार त्यसरी चलाउन समझदार छैन। प्रिस्क्रिप्शनको सट्टामा यो हुन्छ कि ग्राहक सँधै सुन्न मन पर्छ। ठूलो भिन्नता। वास्तवमा, जब म वार्तालापमा ग्रान्युलरिटीमा प्रवेश गर्दिन, मेरो सिफारिश हो कि तपाईं एकल धागा / गुनासो / ब्लग पोष्ट, आदिमा दुई पटक भन्दा बढि जवाफ नदिनुहोस्। सामान्यतया त्यस बिन्दुमा डिमिनिशि returns रिटर्न।
ध्यान दिएर हेर्नु पनि महत्वपूर्ण छ अफसेज हेटर्स जसले निजीमा गुनासो गर्दछन्, र अनन्टेज हेटर्स जसले सार्वजनिक रूपमा गुनासो गर्छन्। कुञ्जीले बुझ्दछ कि पहिलेको उत्तर चाहिन्छ, र पछिल्लो दर्शक चाहान्छ। नकारात्मकता अब एक दर्शक खेल हो, र जब तपाईं (सही) एक एफआरएफलाई अफवाहग्रस्त (वा कष्टप्रद) ग्राहकलाई भन्न चाहानुहुन्छ वास्तविकता यो हो कि विशेष गरी अनस्टेज हेटर्सको साथ, वास्तविक खतरा त्यो ग्राहकलाई गुमाउनु होईन, बरु दर्शकहरूले तपाईंको कम्पनी र तपाईंको मानहरूको बारेमा के सोच्छन्।
अप्रिल 15, 2015 मा 10: 48 PM
जे - समय स्पष्ट पार्नु भएकोमा धेरै धन्यवाद। मैले यस पुस्तकका धेरै प्रतिलिपिहरू हाम्रा स्टाफका लागि पहिल्यै नै अर्डर गरिसकेका छन् किनकि यो जानकारी हाम्रा ग्राहकहरूको लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।
अप्रिल 20, 2015 मा 12: 02 PM
मैले सँधै सरल दृष्टिकोणका साथ यसको बारेमा सोच्दछु कि "ग्राहक सँधै सही हुँदैन, ... तर ती ग्राहक हुन्"। त्यसो भए, यसले मलाई ढिलो बनाउँदछ र उपयुक्त प्रतिक्रिया दिन सक्छ - वास्तविक समस्या के हो भनेर बुझ्नको लागि खोजी गर्दै र केहि उचित प्रतिक्रिया र समाधान हुन सक्छ। यसले "हेटरलाई अug्गाल्न" मेरो प्रयासलाई निर्देशित गरेको छ।
अप्रिल 20, 2015 मा 2: 19 PM
म इमान्दारीसाथ प्रशंसक होइन, कर्ट। मलाई लाग्छ कहिलेकाँही मानिसहरू केवल धक्का लाग्छन् र उनीहरूको नराम्रो व्यवहारलाई माफ गर्नु हुँदैन। सजिलो भयो भन्दा भयो जब तपाईको व्यवसाय मेरो स्वामित्वमा छ!